သင့်အရောင်းအဖွဲ့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း။ Martech Zone
သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2017 သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2017 Douglas Karr
ကျနော့်သူငယ်ချင်းတော်တော်များများကရောင်းအားကောင်းတဲ့လူတွေပါ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုမစခင်အထိသူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်ကိုအပြည့်အ ၀ လေးစားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာပရိသတ်အများကြီးရှိတယ်။ ငါ့ကိုလေးစားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်။ သူတို့လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလည်းရခဲ့တယ်။ ငါရောင်းအားအစည်းအဝေးမှာထိုင်ဖို့တံခါးမှတဆင့်တိုးမြှင့်ဒုတိယအရေးကြီးသော!
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြင်ဆင်ဖို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ မကြာခင်မှာပဲငါဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ ငါတောင်ပံအောက်မှာကျွန်တော့်ကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့ကျွန်တော့်ကိုသိပြီးငါဘာကောင်းလဲဆိုတာကိုပြတဲ့နည်းပြတစ်ယောက်နဲ့စတင်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့အရောင်းအ ၀ ယ်တွေနဲ့အလားအလာကောင်းတဲ့ရောင်းဝယ်မှုကိုရှာဖွေတဲ့အခါငါစိတ်ကြိုက်နည်းဗျူဟာတွေကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲစေပြီးယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိရောင်းဝယ်သူများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုများကိုမည်သို့လိုက်စားသည်ကိုအံ့အားသင့်စွာကြည့်နေသည်။
တစ်နေ့မှာအရောင်းအဖွဲ့ငှားဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။ အဲဒါကိုကျွန်တော်အခုမလုပ်ချင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်မတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအထမြောက်အောင်ကူညီပေးမယ့်မှန်ကန်သောလူတစ် ဦး ကိုအိမ်ထဲဝင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအမြောက်အများငှားရမ်းခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ အတွေ့အကြုံမရှိသောအရောင်းဝန်ထမ်းများမှတစ်ဆင့်ကြိတ်ခွဲသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှု။ ထိုလမ်းကြောင်းကိုမသွားနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီများနှင့်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်ရည်မှန်းပြီးရှာဖွေလိုသည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုတံခါးမှတဆင့်ဆွဲယူနိုင်လောက်အောင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ရှိသည်။
အရောင်းအဖွဲ့ရှိသည့်သူများအတွက် Healthy Business Builder မှဤသတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြထားသည် သင့်အရောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်း ၁၀ ခု.
သင့်အရောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်း ၁၀ ခု
တိကျခိုင်မာစွာပေးပါ လေ့ကျင့်ရေး နှင့်နောက်ဆက်တွဲ။
သော့ကိုသိပါ အားသာချက် တစ်ခုချင်းစီကိုအသင်းအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ၏။
ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပါ တစ် ဦး တည်း အစည်းအဝေးများ။
တစ်ခုရှိသည် ဘက်စုံအမြင် သင့်ဖောက်သည်များ
သင့်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာ Over- မထားပါနဲ့ အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်.
implement ဦး ဆောင်လမ်းပြ နှင့် ခဲသွင်းခြင်း.
အရောင်း၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတို့ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ လျှို နှင့် ဘက်ပေါင်းစုံ.